Uncategorized – စာမျက်နှာ 10 – JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized (စာမျက်နှာ 10)
Team Assemblers Job Description / လုပ်ငန်းများနှင့်တာဝန်ယူမှု Template ကို
ပိုးသတ်ဆေး Handlers တွေကို, မှုတ်, ထိုအပလီကေးရှင်း, အသီးအရွက်များကယောဘဖျေါပွခကျြ / ဂျော့ဘ်ပြီးတော့ Duty Template ကို
ပိုးသတ်ဆေး fungicides ပေါင်းစပ်သို့မဟုတ်အသုံးပြုနိုင်သည်, ချုံပေါ်သို့မဟုတ်ပိုးသတ်ဆေး, ချုံ, မြက်, မြေဆီလွှာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာမှတဆင့်သို့မဟုတ်ရုက္ခဗေဒအသီးအရွက်များ, ဖုန်မှုန့်, အငွေ့, တွန်းလှန်, သို့မဟုတ်ဓါတုဗေဒလျှောက်လွှာ. ယေဘုယျအားဖြင့်အချို့ညွှန်ကြားချက်များနှင့် Express သို့မဟုတ်အမျိုးသားအရည်အချင်းများတောင်းဆိုနေပြီ. Career Skills Requirement Load sprayer tanks using water and compounds, ဖြည့်စွက် accordingto. Mixture pesticides or fungicides regarding application …
Pourers And Casters, Metal Job Description / တာဝန် Template ပြီးတော့တာဝန်တွေကို
ဓာတ်အားပေးစက်ရုံလုပ်ငန်းရှင်များကယောဘဖျေါပွခကျြ / လုပ်ငန်းများနှင့်တာဝန်များ Template ကို
ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized 5
စီမံခန့်ခွဲရန်, လုပ်ဆောင်, သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်ကြောင်းပါဝါထုတ်လုပ်ဖို့ devices တွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထား. ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ကြောင်းပစ္စည်းကိရိယာများန်ထမ်းများကပါဝင်ပတ်သက်. Job Skills Need Observe power-plant gear and indicators to find evidence of difficulties that are operating. ထုတ်လုပ်လိုင်းများအကြားလျှပ်စစ်မီးစီးဆုံးဖြတ်ရန်သို့မဟုတ်အထူးသဖြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုဖန်တီးရန်လက်ကိုင်ကိုထိန်းညှိ. …
Technician ယောဘကိုဖျေါပွခကျြထုတ်ယူခြင်းဇီဝလောင်စာ / ခံမှုနမူနာပြီးတော့လုပ်ငန်းများ
ခန့်မှန်း, သတ်မှတ်, ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အားကစော်ဖောက်ခြင်းသို့မဟုတ်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကိုရွက်လှေများအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများရှိခြင်းခေတ်မီ feedstock နှင့် output ကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစစ်ဆေး. ပွီးမွောကျစေ, နှင့် files တွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထား, စက်ရုံထိန်းသိမ်းခြင်း, ပြင်ဆင်ခြင်းများ, နှင့်လုံခြုံမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ. Job Skills Need Estimate, အတိုင်းအတာ, ဖြည့်, ဇီဝလောင်စာထုတ်လုပ်မှုမှာတွေ့ရှိသို့မဟုတ်ရောစပ်တိုးမြှင် feedstock. ဇီဝလောင်စာများအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုင်တွယ်ထုတ်ကုန် Run’ …
လုံခြုံရေးနှင့် Commodities ကုန်သည်ကြီးများယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန် Template ပြီးတော့လုပ်ငန်းများ
အခွင့်အလမ်းကိုပြောင်းလဲဖို့အရာအားလုံးနှင့်လုံခြုံရေးဝယ်ယူရန်နှင့်ရောင်းချ, မြို့တော်, သို့မဟုတ်အကြွေးတွေ. စာပိုဒ်တိုများနှင့်ဝယ်ယူ၏မော်ဒယ်စွဲချက် Build နှင့်အပေးအယူလုပ်ညှိနှိုင်း. Job Skills Need Business carbon emissions, သို့မဟုတ်ဝယ်ယူ, စျေးကွက်မစ်. ဖောက်သည်များအတွက်အကောင်းဆုံးပမာဏမှာစျေးနှုန်းများဝယ်ယူသို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းနှင့်အတူသဘောတူ. ရှယ်ယာဆည်းပူးသို့မဟုတ်ပေး, ထောက်ပံ့, ထုတ်ကုန်အနာဂတ်, foreign …
လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုတက်ရောက်ဖို့ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / လုပ်ငန်းများနှင့်တာဝန်ယူမှု Template ကို
လေကြောင်းလိုင်းခရီးသည်များသေချာစေရန်အထူးသန်ဆောင်မှုပေး’ ကာကွယ်မှု, လုံခွုံရေး, နှင့်ခရီးစဉ်အတွင်းဇိမ်ခံ. ကွိုဆိုတစ်ဦးချင်းစီ, လက်မှတ်တွေကိုအတည်ပြု, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုပစ္စည်းအသုံးချဖော်ပြရန်, နှင့်အစားအစာများသို့မဟုတ်အရည်ပူဇော်. Job Skills Prerequisite Direct and help such as evacuatingaplane nextacrisis landing travellers in crisis techniques. Publicize and illustrate disaster …
Correspondence Clerks Job Description / Functions များနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများနမူနာ
Create words or automated messages in reply to asks regarding delinquent reports, destruction states, credit along with other details, ကုန်ပစ္စည်း, incorrect billings, or poor providers. Obligations can include gathering files to create respond and organizing correspondence. Career Skills Prerequisite Make letters and documents such as for instance accounts, credit inquiries, …
Pediatricians, အထွေထွေယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / Functions များနှင့်တာဝန်ယူမှုနမူနာ
Physicians who address, အစက်အပြောက်, and help alleviate problems with kid’s incidents and disorders. Job Skills Need Examine people or get, ပွီးမွောကျစေ, and understand analytical assessments to obtain info on medical problem and ascertain diagnosis. Children that are examine regularly to evaluate growth and their advancement. Recommend or render drugs, ကုသ, …
ယာဉ်အဆိုတော်များကယောဘဖျေါပွခကျြ / တာဝန်ယူမှုနမူနာပြီးတော့ Functions များ
လက်ဖွံ့ဖြိုးသို့မဟုတ်ပွားနည်းပရိယာယ်တစ်ခုရွေးချယ်ရေးသုံးပြီးစျေးကွက်နှင့်ခင်းကျင်းပြသပစ္စည်းများလုပ်, ထိုကဲ့သို့သောဥပမာအားဖြင့်ယက်လုပ်ခြင်းများအတွက်အဖြစ်, ဂဟေ, အိုးလုပ်ငန်းနျင့်ဆိုင်သော, နှင့် needlecraft. Job Skills Qualification Develop objects that are practical or decorative by-hand, နည်းဗျူဟာများနှင့်ပစ္စည်းမျိုးစုံအလုပ်သမား. ဖြတ်, ပုံသဏ္ဌာန်, တော်အောင်ပြုပြင်, ပူးပေါင်း, အနာ, or elsewhere …
စာမျက်နှာ 10 ၏ 56« ပဌမ...«89101112 » 203040...နောက်ဆုံး »